Maanta oo kale waa xuskii kacaankii barakeysnaa ee 21ka Oktober 1969… – Hagaag.com
Maanta oo kale waa xuskii kacaankii barakeysnaa ee 21ka Oktober 1969…
Posted on 21 Oktoobar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Maanta waa 21 oktober, waxaa maanta oo kala la xusi jiray kacaankii barakeysnaa ee dalka ka hana qaaday 1969kii, kadib markii dowladihii xuriyada ka dib ay gefeen habkii loo maamuli lahaa dal, iyada oo waagaasi ay iska yareyd dadka wax bartay, sidoo kalena ummaduna aheyd dad la xukumi karo.
Ku dhowaad sodon sano maxaa ka dambeeyey burburkii kacaanka 1991, sheekadaasi kuligeena waa ka dheregsan nahay.
Hadaba maxaa nala gudboon hadda, waxaan arkaa in loo baahan yahay kacaan kale oo dalka ka hana qaada oo soo celiya heybada iyo sharafta Soomaalida, ma garan karo nooca kacaanka balse wax u ek xukunkii dowlada dhexe.
Federaal ma naqaano waanna lagu wareeray, mana ku haboona dalkan federaal haddii aan si rasmi ah loo qeexin, walow dadkeena qof weliba sida dantisa ay ku jirto u fasirto shuruucda iyo dastuurka.
Hala xuso 21ka Oktober yaan la hilmaamin, hogaamiyayaasha hadda jooga badankooda waxay wax ku soo barteen tacliin bilaash ah oo kacaanka u fidiyey dadweynaha iyaga oo aan laheyn dhaqaale waagaasi uu ku filnaa, laakin kacaanka waxaa ka go’neyd in ummada laga horumariyo dhinaca tacliinta.
Ilaahow dalkeena iyo dadkeena noogu soo celi siday ahaan jireen..